Baradhada | December 2019
Baradhada "Blue": sifooyinka kala duwan iyo sifooyinka beerashada
Doorashada baradho loogu talagalay beeritaanka dalka ama goobtu waa arrin aad u muhiim ah, sababtoo ah kala duwanaanta saxda ah waa fure u ah goosashada wanaagsan. Maanta waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo khudraddan ah, waxayna dhammaantood kala duwan yihiin midba midka kale ee dhadhankiisa, midabka, cabbirka iyo sifooyinka kale. Kala duwan ee "Blue" waxa ay ka heshay caan ka mid ah bannaanka u badan ee ay fududahay in beerashada, bandhig qurux badan iyo dhadhan fiican ee digriiga.
Siyaabaha loo bixiyo si loola dagaalamo qolofada barafka
Baradhadu - tani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, oo jecel khudaar badan, oo laga heli karo qof kasta beerta. Laakiin, sida dhaqamada kale, waxay la kulmaan cudurrada ka soo baxa muuqaalka iyo hoos u dhadhankiisa. Kuwa ugu badan ee kuwani waa qolof. Marka xigta, wax badan ayaan ka baran doonnaa qolofta barafka: iyada oo sawir, sharaxaad iyo hababka daaweynta, iyo wixii la sameeyo si looga hortago dhacdadeeda.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beeray baradhada
Wax qarsoodi ah maaha in baradhada la beeray oo la koray gacmahooda si joogta ah had iyo jeer waa mid caafimaad leh oo ka sii fiican kuwa la iibsaday. Taasi waa inay si dhab ah u koraan dalag tayo sare leh, waxaad u baahan tahay inaad ogaato goorta iyo sida loo abuuro baradhada dhulka hoostiisa. Marka xigta, tixgeli shucuurta beerto si aad u goosato.
Goorta iyo sida loo bacrimiyo baradho
Baradhadu waa mid ka mid ah cagaarka ugu caansan, si ay u beertaan dalag badan, waxaad u baahan tahay inaad si habboon u bacrimiso. In our article waxaan kuu sheegi doonaa nooca bacriminta ah ee baradho waa ka fiican in la isticmaalo inta lagu guda jiro beerto iyo inta lagu jiro daryeelka ee warshadda. Waa maxay sababta Bacriminta Baradhada Baradhada, si ka duwan noocyada kale ee dalagyada, waxay u baahan yihiin nafaqooyin badan.
Habka ugu wanaagsan ee bacrimiya baradho
Baradhadu - mid ka mid ah dalagyada waaweyn ee koray ee dalkeenna. Hase yeeshee, ma ahan carrada oo aan cimiladu ku haboon tahay helitaanka dhalid la aqbali karo. Maqaalkani wuxuu u taagan yahay mawduuca Bacriminta kaas oo gacan ka geysan doona kordhinta wax-soosaarka iyo, xaalad kastoo kasta, soo ururiso qaddar mug leh oo dalagga ah.
Hilling habboon ee baradho leh wado
Helitaanka dhalidda sare waa himilada ninkii beerta iyo beerta oo idil, iyo in uu ku guulaysto daryeel kasta oo baahida loo qabo. Qodobkani waxaanu ku sharxi doonaa sida loo kordhiyo dhalidda baradho iyadoo la adeegsanayo hilling iyo sida loo sameeyo nidaamkan sida ugu sahlan uguna dhakhsaha badan oo aan macquul ahayn iyada oo aan lumin tayada shaqada. Horumarinta baradhada leh cagajooga socodka ayaa ah marxalad lagama maarmaanka u ah horumarinta wanaagsan ee duurka.
Sidee loola tacaali karaa alternaria bataatiyada?
Alternaria waa caleenta fangaska caaga ah ee saameeya dhirta badan, taas oo keeneysa in aan la cuni karin cunnida miraha, marka lagu daro, waa mid ka mid ah sababaha cudurada bini-aadanka ah, sida xasaasiyad kala duwan iyo xiiq-dheecaan. Maqaalkani waxa uu si buuxda u hirgeliyey horumarinta alternaria ee baradhada, waxaa ku jira sawir leh calaamadaha, sharaxaad guud ee cudurka iyo hababka daaweynta.
Baradhadu: Guryaha faa'iido iyo khilaafaadka
Qoysas badan oo reer Ukraan ah, baradhadu waa rootiga labaad. Haddii aysan jirin, way adag tahay in la qiyaaso miiska caadiga ah iyo munaasabadda. Intaa waxaa dheer, karbashooyinka casriga ah waxay wax ka karsan karaan khudaarta nafaqada leh. Laakiin miyuu dhirta u caddeeyaa jacaylka noocaas ah? Later ee maqaalka waxaan ka hadli doonaa waxyaabo faa'iido leh oo waxyeelada leh ee digriiga baradho, iyo sidoo kale diiradda saaraya sifooyinka noocyo kala duwan.
Sida loola macaamilo wireworm on baradho
Ka sokow dadka, baradhada waxaa lagu jecel yahay ma aha oo kaliya kuwa lamid ah Colorado, laakiin sidoo kale by wireworms. Marka hore waxay cunaan qaybta dhulka ee baadiyaha baradho. Dadkoo dhan waa la yaqaan, dadkuna way yaqaanaan sida looga takhaluso. Laakiin kan dambe wuxuu ku shaqeeyaa dhulka - marar dhif ah ayaa la arkaa, laakiin waxay dhaawici karaan wax aan ka yarayn kan ugu horreeya. Way adagtahay in la ogaado, laakiin marka ay ku dhacaan baradhada, waa caadi ahaan goor dambe, oo aan la badbaadin karin.
Dhadhamin iyo goosashada: noocyo baradho ah jukupy Jukovsky hore
Waddankayaga, baradhadu waxay u badan yihiin sida baahida loo qabo rootiga, sidaas darteed qof kasta oo leh fasax xagaaga iyo xitaa beerta jikada yaryar waxay dooneysaa inay ku beerto khudradan. Dabcan, waxaad had iyo jeer dooneysaa inaad hesho natiijada ugu sareysa ee kharashka ugu yar, taas oo macnaheedu yahay in xulashada noocyada beeraha ah waa in lala yimaadaa mas'uuliyadda ugu weyn.
Tilmaanta iyo sifooyinka noocyada baradhada sii kordhaya "Rocco"
Malaha, midkeenaba, inaan iibsano baradhada, waydiiso su'aalo badan ee iibiyaha ku saabsan noocyada kala duwan, dhadhanka, habka ugu fiican ee karinta. Tani ma aha mid la yaab leh, maanta waxaa jira noocyo kala duwan oo baradho ah ee dhadhanka dhadhanka, laakiin ka mid ah noocyada kala duwan ee jira waxaa ugu cadcad, mid ka mid ah kuwaas oo laga wada hadli doonaa.
Barafka dhexe-hore baradho kala duwan Ilinsky
Ka mid ah jecel ee noocyo hore ee baradho, Ilinsky helay sumcad weyn, taas oo caan ku ah dalagyada fiican, dhadhan wanaagsan iyo tayada ganacsi ee aad u fiican. Taariikhda Is-beddelka Daraasadu waxay keentay kooxda taranta ee gobolka Moscow oo ku yaal dhowr beeralood oo tijaabiyey noocyada baradhada.
Baradhada beeraha ee xaafadaha
Cimilada bartamaha Russia waa dhexdhexaad ahaan qaaradda, jiilaalka waa baraf iyo qabow, xagaaga waa mid diiran oo hawo leh. Xaaladahaas oo kale, beerashada beerta beerta waxay yeelan doontaa muuqaalada badan. Halkan, noocyo kala duwan oo ku haboon, iyo ma aha tiknoolijiyad, iyo waqtigeeda, iyo cayayaanka. Hadda wax walba oo ku habboon.
Baradhada "Slavyanka": sharaxaadda iyo sifooyinka beerashada
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo si sahlan loo abuuro noocyo baradho waa Slavyanka, doorasho fiican oo loogu talagalay beeralayda cusub. In maqaalkan waxaad ku baran doontaa sharaxaadda kala duwan, sida loo abuuro baradhada "Slav" on your site. Qeexida iyo sifooyinka noocyada kala duwan Caleenta baradho waa kala duwanaansho goosashada goosashada - 110-120 maalmood waa suurtogal in la goosho, taas oo ah mid la aqbali karo oo loogu talagalay shirkadaha warshadaha, beeraha yaryar.
Baradhada Nevsky: sifooyinka kala duwan, beerashada iyo daryeelka
Iyadoo aan lahayn badeeco sida baradhada, ma aha hal guri inuu sameyn karo. Waa la kariyey, la shiilay, la dubay - noocyo kala duwan ayaa ku haboon ujeedadaas. Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa kala duwanaansho iyo caan ah Nevsky, oo leh tiro ka mid ah faa'iidooyinka aan shaki lahayn. Qeexida noocyada kala duwan Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, maxaa yeelay waxay leedahay dhadhan fiican, dhalid sare, iyo sidoo kale iska caabinta cudurrada iyo xaaladaha xun ee deegaanka.
Kaydinta saxda ah ee baradho ah jiilaalka
Goosashada baradhadu waa ilaha sharaf leh ee ninkii beerta ka shaqaynayay oo dhiirigelin kara kalsoonida mustaqbalka, laakiin natiijadan bilaha badan ee dadaalka ah ayaa si sahlan loo burburin karaa kaydka aan habboonayn. Aynu ogaanno sida loo kaydiyo baradhada. Shuruudaha baradhada goosashada xilliga jiilaalka Sida aad ogtahay, qodista beergooyinku waxay bilaabmaysaa bilowga Juun ilaa Luuliyo, si kastaba ha ahaatee, digriiga dhallinyaradu uma dulqaadanayaan kaydinta muddada dheer, maadaama aysan weli helin maqaarka maqaarka ah ee maqaarka ah.
Noocyada beerista iyo sifooyinka kala duwan ee baradhada Veneta
Noocyada baradhada "Veneta" (ama "Vineta") waa beereyaha baradhada aadka u caansan ee booska Post-Soviet. Tani noocyo kala duwan ee digriiga waxaa lagu gartaa fududaynta beerashada iyo tayada dhadhanka wanaagsan ee dalagga la goostay. In this article waxaan ka hadli doonaa sifooyinka iyo sharaxaad ka duwan ee kala duwan "Veneta", iyo sidoo kale sida loo koro dalag badan oo baradho ah ee gurigiisa dalka.
Barafka Cas ee Holland
Bannaanka ayaa sii wadaan inay raadiyaan nuucyada barafka ah ee ugu horey iyo midhaha hore ee baradho ah si joogto ah. Dhawaan, noocyada baradhada Cas ee Red Scarlett ayaa noqonaya mid aad u caan ah, sifooyinka astaamuhu kama tago indho la'aan. Tixgelin kala duwan Tan baradho waa hawsha xoolaha Dutch. Waxaa la helay dhawaan, laakiin si dhaqso ah u qaatay meel qiimo leh sababtoo ah dhalidda wanaagsan, precocity, tayada ilaalinta aad u fiican iyo gaadiidka, smoothness iyo qaabka digriiga.
Baradhada "Zhuravinka": sharaxaad, gaar ahaan beerashada
Baradho "Zhuravinka" ma aha sanadka ugu horeeya ee beeralayda badan. Waxaa la jecel yahay dhalidda iyo cudurada caabuqa. Macluumaadka ku saabsan waxa kale ee caan ku ah baradhada Zhuravinka, akhrina sharaxaadda kala duwan ee hoos ku qoran. Sharaxaadda "Zhuravinka" waxaa loola jeedaa noocyada dambe ee miisaska. Inta u dhaxeysa beerto iyo goosashada waxay qaadataa 80-100 maalmood.
Kala duwanaanshaha baradho "Cherry" ("Bellarosa")
Baradhadu waxa laga heli karaa beerta oo dhan. Kordhay, bannaanka u doorey noocyo hore-Bisaylkiisa. Kuwaas waxaa ka mid ah "Bellarosa". Waxay u fiican tahay beerta gaarka loo leeyahay, iyo warshad ballaaran oo beerto ah. Si aad u fahanto sababta sababta baradho "Cherry" waa mid aad u caan ah ee beerta, waxaad u baahan tahay kaliya inaad akhrido sharaxaadda kala duwan.